Ogaden News Agency (ONA) – Khilaaf Mudo Dheer Udhexeeyay Qawmiyada Oromada oo Dalka Germany Lagu Soo Afjaray.
Khilaaf Mudo Dheer Udhexeeyay Qawmiyada Oromada oo Dalka Germany Lagu Soo Afjaray.
Posted by ONA Admin	/ June 29, 2014
Shalay ooy taahaydu ahayd 28/6/2014, waxaa lagu qabtay caasimada wadanka Jarmalka ee Berlin shir balaadhan oo in mudo ah abaabulkiisa loogu jiray siduu uqabsoomi lahaa. Shirkan ayay iskugu yimaadeen ururada siyaasiga ah iyo hay,adaha kala duwan ee bulshada rayadka ah ee Qawmiyada Oromada. Kulankan ayaa ujeedada oogu wayn ee looqabtay ay ahayd in lagusoo afjaro xal waarana loogu helo khilaafaad xoogan oo xaga fikirka iyo maabaadii,da iyo masiirka mujtamaca Oromada kusalaysanaa oo mudo dheer caqabad wayna kunoqday xidhiidhka iyo wada shaqaynta kadhaxaysa qaar kamid ah hay,adaha iyo ururada siyaasadeed ee qawmiyada Oromada.
Waxaa shirkan goob joog ka,ahaa guud ahaan madaxda iyo masuuliinta Oromada ee khilaafku sookale dhexgalay, kuwaasoo mawqif midaysan kagaadhay sidii maamul iyo hogaan midaysan loogu samayn lahaa bulsho waynta Qawmiyada Oromada isla markaana simidaysan la,iskaga kaashan lahaa xaaladaha siyaasadeed ee kusoo cusboonaaday geedi socodka siyaasada Itoobiya oo saamayn wayn kuyeelatay jiritaanka qawmiyada Oromada. Kulankan balaadhan ayaa yimid kadib markii Aqoonyahanka, Siyaasiyiinta iyo Bulshada rayadka ah ee Qawmiyada Oromadu isku raaceen ineey lagama maarmaan tahay in lamideeyo waxqabadka, aqoonta, dhaqaalaha iyo cududa Qawmiyada dal iyo dibadba. Hogaanka cusub ee ladoortay ayaa waxaa horyaala hawlo muhiim ah oo ubaahan in loola jaanqaado sitaxadar iyo masuuliyadi ay kudheehantahay taasoo uhorseedi karta in qawmiyadu simidaysan oo wadajir ah ooga hortagto dhibaatooyinka baahsan ee Gumaysiga Itoobiya ay kuhayso bulshada rayadka ah ee Qawmiyada Oromiya.
Dhanka kale waxaa shirkan kaqaybgalay oo kaalin balaadhan kaqaatay wafti kasocda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya. Waftigan oo lagu martiqaaday munaasabadan ay iskugu yimaadaan ururrada Qawmiyada Oromada ayaa Jabhada ONLF waxaa ooga qaybgalay Madaxda Jaaliyada Somalida Ogadenya ee dalka Jarmalka. Waxaa kale oo waftiga ONLF hormuud u ahaa Kuxigeenka Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada (HAAU) ahna Masuulka Xafiiska Arimaha Itoobiya ee Hogaanka Arimaha Dibada ee ONLF Mudane Xasan Macalin. Mudane Xasan ayaa madasha kulankan wuxuu kajeediyay khudbad meelo badan taabanaysa taasoo uu kumuujiyay mawqifka iyo go,aanka rasmiga ah ee jabhada ONLF ee kuwajahan iskaashiga iyo wadashaqaynta ay Jabhadu laleedahay qawmiyadaha kale ee kuhoos dulman Gumaysiga Itoobiya kuwaasoo dhamaantood kamidaysan sidii la,iskaga kaashan lahaa isla markaana la,iskaga xorayn lahaa Gumaysiga Wayaanuhu hormuudka uyahay ee gabalkiisu dhacay.
Shirkan ayaa lagu soo gabagabeeyay jawi aad uwanaagsan kaasoo laga gaadhay ujeedadii looqabtay. Waxaa laga soo saaray shirka go,aamo iyo heshiis wax ku,ool ah. Heshiiskan ayaa kusoo aadaya xili ay hadheeceen deegaanka Qawmiyada Oromada banaanbaxyo ay dhiig badani kudaateen oo lagaga soo horjeedo siyaasada guracan ee Gumaysiga Itoobiya.
ONA /Berlin – Germany
waxaan soo jeediniyaa in labadan qoomiyadood ee ah iladeer isla ah kushitig iyo waalo wax badan wadaaga sidaas owgeed waain aan si dhab ah oo aan ahayn shirar meelahaa laguqabto oo kaliya haguulaystaan all brothers oromo and s ogadenia ha walaa loobaan ha is kaashadaan ha iska ilaaliyaan dabinada gumaysiga